भारतमा ६१ दिनयता सब भन्दा कम को’रोना सङक्रमित ! | प्रमुख समाचार
June 7, 2021 NepstokLeaveaComment on भारतमा ६१ दिनयता सब भन्दा कम को’रोना सङक्रमित !
एजेन्सी – भारतमा आइतबार १ लाख ६३६ जना थप व्यक्तिमा को’रोना सङ्क्रमण देखा परेको छ । को’रोना सङ्क्रमितको यो संख्या ६१ दिनयताको सव भन्दा कम हो । हाल भारतमा को’रोना सङ्क्रमितको संख्या २ करोड ९० लाख १० हजार ६११ पुगेको मन्त्रालय सोमबार जानकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी भारतनमा को’रोना सङ्क्रमणको कारण ज्यान ग’माउने व्यक्तिको संख्यामा सोचेजस्तो कमि नआए तापनि केहीयता यस प्रकोपको कारण ज्यान गु’माउने पनि केही कम भने भएको केन्द्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सोमबार जानकारी दिएको छ ।
भारतमा गत २४ घण्टामा २ हजार ४२७ जनाको मृ’त्यु भएपछि यहाँ कोरोनाबाट मृ’त्यु भएका व्यक्तिको संख्या ३ लाख ४९ हजार १८६ पुगेको छ । गत २४ घण्टामा भारतमा १ लाख ७४ हजार ३९९ जना सङ्क्रमित को’रोना मुक्त भएका छन् । यसैसँग भारतमा २ करोड ७१ लाख ५९ हजार ६०९ जना को’रोना मुक्त भएका छन् ।
हाल यहाँ १४ लाख १ हजार ६०९ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् । भारतमा जुन ६ तारिखसम्म ३६ करोड ६३ लाख ३४ हार १११ जनाको को’रोना परिक्षण गरेको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।